မီဒီယာ |
အပြန်အလှန်ထိတွေ့မှု panel က ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကို ဘယ်လိုသဘောပေါက်သလဲ။
22-04-09 တွင် admin မှ
EIBOARD သည် အရည်အသွေးမြင့် all-in-one သင်ကြားရေးစက်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။ယနေ့၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အပြန်အလှန်ထိတွေ့မှု panel သည် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပုံကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။1. ကြိုးတပ်ချိတ်ဆက်ခြင်း A. စာသင်ခန်းတွင် ကြိုးတပ်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
admin မှ 22-03-24 ရက်နေ့တွင်
1. စက်ကိရိယာပေါင်းစပ်မှု၏မြင့်မားသောဒီဂရီ;2. ဖုန်မှုန့် ၊ ခိုးမှု ၊ တိုက်မိမှု နှင့် အဆင်ပြေသော သိုလှောင်မှု ၊3. ခိုင်မာသောရွေ့လျားနိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်ခွဲဝေမှုကို အပြည့်အဝသိရှိနားလည်ပြီး စက်ကိရိယာများ၏ အသုံးချမှုနှုန်းကို အလွန်တိုးတက်စေပါသည်။4. စစ်ဆင်ရေး ဈ...
မူလတန်း သင်ထောက်ကူစက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်သင့်လဲ။
admin မှ 22-03-18 ရက်နေ့တွင်
လူအများအပြားကို စာသင်ပေးခြင်းဖြင့် အားလုံးကို ပေါင်းစည်းကာ ပေါင်းစည်းခြင်းမှာ ရီစရာအချက်များ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပါ ဘဏ်ကရေကို စက်နဲ့ပိုင်တယ်၊ အခွန်အချက်အလက်ကို စုံစမ်းပြီးတော့လည်း သွားခဲ့တယ်..။
Smart blackboard တပ်ဆင်ထားသရွေ့ သင်ကြားမှုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် မခက်ခဲပါ။
ပညာရေးသည် လူသားအားလုံးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။သင်ကြားမှုပုံစံနှင့် ဆရာများ၏ ခွန်အားများသည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမှုအသိပညာ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။သတင်းအချက်အလက် ပညာရေးမှာလည်း ဆိုးဆိုးရွားရွား ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်..။
သင်ကြားမှုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် မခက်ခဲပါ၊ သင်လိုအပ်သမျှမှာ စမတ်ကျောက်သင်ပုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပညာရေးသည် လူသားအားလုံးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။သင်ကြားမှုပုံစံနှင့် ဆရာများ၏ စွမ်းပကားသည် ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမှု အသိပညာအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သတင်းအချက်အလက်ပညာရေးသည် မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်...
သင်ကြားမှုတွင် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော flat panel ၏ အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော ပြားချပ်ချပ်ပြားသည် လည်ပတ်ရန် ရိုးရှင်းရုံသာမက လုပ်ဆောင်နိုင်သည် ။သင်ကြားမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။၎င်းသည် ဆရာ ဆရာမများ၏ ဝန်ကို ပေါ့ပါးစေပြီး ကျောင်းသားများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။၎င်းကိုမဝယ်မီ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သောပြားချပ်ချပ်အပြားအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိထားရမည့်အရာများ။1. High-...
Smart Blackboard အင်္ဂါရပ်များကို အတိုချုံးရှင်းပြထားပါသည်။
စမတ်ကျောက်သင်ပုန်းတွင် အလွန်အစွမ်းထက်သော လုပ်ဆောင်ချက်များရှိပြီး ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများနှင့် မိဘများက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြိုဆိုကြသည်။ယနေ့တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အတိုချုံးမိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သူ EIboard ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။ဒီဆောင်းပါးကနေတဆင့် သင်ဟာ နက်နဲစွာ နားလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် 1. Courseware Smart...
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော ပြားချပ်ချပ်အကန့်သည် ကြိုးမဲ့စခရင်ကို ပရိုဂျက်တာလုပ်ဆောင်ချက်ကို မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်သနည်း။
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောပြားချပ်ချပ်ပြားပြားအား လုပ်ငန်းများနှင့်ယူနစ်များစွာတွင်အသုံးပြုထားပြီး၊ အသုံးပြုသူသည် ၎င်း၏အစွမ်းထက်သောလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ကောင်းမွန်သောပြသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော၊ အထူးသဖြင့် မျက်နှာပြင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ၊ ဤအင်္ဂါရပ်သည် သုံးစွဲသူများအား အထက်မျက်နှာပြင်ပါအကြောင်းအရာကဲ့သို့သော ကွန်ပျူတာများ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများနှင့် တက်ဘလက်စက်ပစ္စည်းများသို့ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံဖို့...
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော ပြားချပ်ချပ်ပြားတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်များ ရှိပါသလား။လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုဒုက္ခပေးသလဲ။
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော အပြားပြားသည် ဓါတ်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်ပါသလား။လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေမှာလား။တကယ်တော့၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသောပြားချပ်ချပ်ခွံအများစုသည် engineering clinker နှင့် sheet metal အစိတ်အပိုင်းများကိုလက်ခံသည်၊ သို့သော်ဓါတ်ရောင်ခြည်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးစံနှုန်း၊ လုံခြုံရေးအကွာအဝေးရှိဓါတ်ရောင်ခြည်တန်ဖိုးကိုရရှိရန်မလိုအပ်ပါ။
ထိတွေ့မှုအမှတ် အမြဲမှားနေပါက ဘာလုပ်ရမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဉ်အကြောင်းအရာတင်ဆက်မှုအတွက် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသောအပြားပြားကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ထိစခရင်ကို အမြဲတမ်းနှိပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက၊ အစည်းအဝေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။အသုံးပြုသူအများအပြားသည် ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်တွင်ပင် ၎င်းတို့သည် ပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။သူတို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။...
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော အပြားပြားအပြားကို အဓိကအားဖြင့် မည်သည့်အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုကြသနည်း။အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
admin မှ 22-02-17 ရက်နေ့တွင်
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောပြားချပ်ချပ်ပြားအား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများ၊ လေ့ကျင့်ရေးယူနစ်များ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျောင်းများ၊ ပြပွဲခန်းမများနှင့် အခြားအခြေအနေများတွင် အဓိကအားဖြင့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော flat panel ၏ အဓိကအသုံးချပုံများဖြစ်သည်။ဒါတွေကို အသုံးချတဲ့အခါ ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိလဲ...
EIBOARD အစည်းအဝေးသည် ကပ်ရောဂါလွန်ခေတ်တွင် စံနမူနာသစ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးခင်းကျင်းပြသစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဂေဟဗေဒမဟာမိတ်အဖွဲ့ တည်ထောင်ခြင်းသည် The Times မှ တွန်းအားပေးသည့် ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားနှင့် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကြောင့် မလွဲမသွေရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်သည်။ဤအချက်သုံးချက်သည် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်ပြသမှုလုပ်ငန်းများကို မိတ်ဖက်စနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် တွန်းအားပေးပါသည်။တစ်လုံးပေါ်မှာ...